I-psychometer: Konke odinga ukukwazi mayelana nale divayisi | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Izinsimbi Zomkhathi
Namuhla size ngokuchaza ukusebenza kwelinye lamadivayisi wokulinganisa ku-meteorology. Sizokhuluma ngakho I-psychrometer. Kuyisikhali esisetshenziselwa ukukala okuqukethwe komphunga wamanzi kukholomu yomoya. Ukwazi umhwamuko wamanzi osemkhathini kubalulekile ukuthola izinga lomswakama.
Uma ufuna ukufunda ukuphatha i-psychrometer, zonke izici zayo nokunakekelwa okudingayo, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Yini i-psychrometer
2 Ungayisebenzisa kanjani i-psychrometer
3 Izinga lokushisa nomswakama
4 Izixwayiso okufanele zithathwe ukwenza ukufundwa kahle
5 Ukugcinwa kuyadingeka
Njengoba sishilo kwisingeniso, kuyithuluzi lokukala umusi wamanzi emoyeni. Ukuze wenze lokhu, liqukethe pair of ama-thermometer engilazi anekholomu ye-mercury (njengama-thermometer amadala). Zibekwe epuletini. Enye yazo ibizwa ngebhalbhu elomile kanti enye ibizwa ngebhalbhu emanzi. Kubizwa ngokuthi kufakwe ibhalbhu le-mercury ikhava noma ulwelwesi lwendwangu kakotini okuthiwa i-muslin, edinga ukuba manzi ukuthola izinkomba ezidingekayo.
Isibani esimanzi simbozwe ngemisipha ehlanzekile futhi sigcwele amanzi ngaphambi kokubuka. Lapho isibani sinomoya, sizokhombisa izinga lokushisa kwesibani esimanzi kanye nokunye kwesibani esomile.
Ungayisebenzisa kanjani i-psychrometer
Ukuthola amazinga okushisa alinganiswa ngawo womabili ama-bulb, kufanele kwenziwe lezi zinyathelo ezilandelayo.
Kufanele sifunde i-thermometer ye-bulb eyomile esondela ebangeni leshumi. Lokhu kushisa kuphawula ukushisa kwemvelo.
Simanzisa i-muslin yethemometha le-bulb emanzi isikhathi eside noma kaningi ngangokunokwenzeka ngamanzi ahlanzekile kuze kube yilapho ithonsi lakha ezansi kwalo.
Ukumanzisa i-muslin akufanele sibe ne-psychrometer elungiswe ngaphakathi kwejazi lesimo sezulu. Kumele iyiswe esitsheni esinamanzi ku-psychrometer ukuze isibani esine-muslin sicwiliswe kulolo ketshezi.
Ngokuvamile, amanzi kufanele agcinwe esitsheni seglasi esibekwe ngaphakathi kwendawo yokuhlala yesimo sezulu. Ingubo sizoyichaza ngokuhamba kwesikhathi ukuze siyazi kangcono. Kuyadingeka ukuzama ukugcina isitsha simboziwe ukuze amanzi ahlale ehlanzekile futhi nomswakama ngaphakathi kwendawo yokukhosela sezulu ungashintshiwe.
Kunezikhathi lapho umswakama uphakeme impela. Kulesi simo i-muslin ingahle ibonakale imanzi, kepha izodinga ukuba manzi futhi. Uma izinga lokushisa kuma liphezulu noma umswakama ohlobene uphansi kakhulu, Uzodinga ukumanzisa imisipha isikhathi eside ngokwanele ukuze yome. Umbukeli angalinganisa ukuthi izinga lokushisa kwe-bulb lizoba ngu-0 degrees noma ngaphansi uma kubanda kuma-ambient.
Izinga lokushisa nomswakama
Uma i-muslin yoma ngaphambi kokuthi i-thermometer ikhombise ukushisa kwesibani esimanzi esifanele, senza isilinganiso esingalungile.
Kunezimo zezulu eziningi namazinga okushisa emhlabeni jikelele. Ngakho-ke, kunezifunda lapho amazinga okushisa ephakeme futhi nomswakama uphansi. Lezi izi izindawo eziwugwadule noma eziwugwadule. Kulezi zikhathi kufanele sisebenzise amanzi amasha ukumanzisa imisipha futhi sigweme ukomiswa ngaphambi kwesikhathi.
Ukugcina amanzi epholile, angagcinwa esitsheni esinezimbobo, kepha uzama ukushiya isitsha ngaphandle kwejazi ukugwema ukushintsha umswakama ongaphakathi kwaso.
Esinye isinyathelo okufanele usithathe ukwenza i-psychrometer isebenze ukuqhuba ifeni ukuhlinzeka ngokugeleza komoya okungapheli. Lo moya kufanele udlule kuma-thermometer ukuthola isilinganiso esifanele. Uma kwenzeka ukuthi izilinganiso zenziwa ebusuku, kufanele kusetshenziswe ukukhanya. Uma i-psychrometer esiyisebenzisayo iyindwayimane, kufanele siyiphendule ngejubane lezinguquko ezine ngomzuzwana. Lesi sivinini se-spin sisetshenziselwa ukuthatha ukufundwa okusheshayo. Yilapho-ke lapho kufanele ume ngobumnene uthathe ukufundwa emthunzini.
Futhi kufanele singenise umoya owanele imizuzu emithathu. I-mercury ku-thermometer kufanele imise ukwehla kwayo futhi ifinyelele kubude bayo obuncane bekholomu. Ukufundwa kufanele kuthathwe ngokusondeza amanani kuye kokuyishumi. Inani esizolithola kuzoba lelo lokushisa kwesigaxa esimanzi.
Sizocima ifeni futhi uma sibheka ebusuku, sizocisha ukugxila.
Uma izinga lokushisa lomoya lingaphansi noma lilingana no-3 degrees, kuyadingeka ukuthambisa i-muslin ngamanzi ngezinga lokushisa eliphakeme. Lokhu kuzoncibilika ngokuphelele noma yikuphi ukwakheka kweqhwa kubhalbhu ye-thermometer noma kwi-muslin uqobo.
Izixwayiso okufanele zithathwe ukwenza ukufundwa kahle
Uma sifuna ukuthatha idatha ithembeke ngangokunokwenzeka, kufanele sicabangele ezinye izici:
Lapho sifunda ama-thermometer, kufanele sime ebangeni elilinganayo elilinganiselwa ku-30 ​​cm noma ngaphezulu ukugwema ukuthi ukushisa komzimba wethu kuthonya amazinga okushisa e-thermometer. Ngale ndlela sizothola ukufundwa okulungile
Ngawo lowo mzuzu, qiniseka ukuthi umugqa wokubona uhlangana ne-meniscus ketshezi futhi ubheke ngqo kuma-thermometer. Ngale ndlela sizobe sigwema amaphutha e-parallax.
Uma ukufundwa kwe-thermometer kwenziwa ebusuku, kufanele sigcine isibani sikagesi sikhanyiselwe isikhathi esifushane kakhulu futhi singasilethi eduze kocingo. Ngaphandle kwalokho kuzothinta ukuthatha amazinga okushisa.
Uma kusetshenziswa i-psychrometer yokujikijela, kuncane ukukwenza lokho ngaphandle nasethunzini eliseduze nendawo yokubuka yezinzwa.
Indawo yokuhlala yesimo sezulu iyithuluzi elethula ngalo liyisibonakaliso esihle kakhulu sokunakekelwa onaso obuka iSiteshi sakhe. Bobabili badinga ukunakekelwa okuthile ukuze babavikele. Nakhu ukunakekelwa:
Ukuhlanza amajazi okungenani kanye ngosuku susa ukungcola nothuli okungase kuhlale.
Upende kufanele ube sesimweni esihle. Kwanele ukupenda njalo ezinyangeni eziyisithupha. Uma isiteshi siseduze nogu kungcono usipende njalo ezinyangeni ezintathu.
Ngemuva kokuqeda ukubonwa kokugcina kosuku, shintsha amanzi asetshenziswe ukumanzisa imisipha i-thermometer yesibani esimanzi. Sizophinde sigeze isitsha esiqukethe.
Kanye ngesonto shintsha imisipha.
Ngalolu lwazi ungafunda ukusebenzisa i-psychrometer.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Izinsimbi Zomkhathi » I-psychrometer
I-athikili enhle kakhulu, uma iqhathaniswa nokunye engikutholile, lena ihleleke kahle kakhulu. Nginombuzo ngomsebenzi okufanele ngiwenze. Ngidinga ukukala ukushisa kwe-bulb emanzi kubhayela okushisa okuphezulu kakhulu okuku-100-120ºC. Ngalokhu, bengilokhu ngifuna i-psychrometer evumelanisa nalolo hlu lwamazinga okushisa phakathi kwabahlinzeki abahlukahlukene, kepha angikutholi. Ngabe kukhona owaziyo? Ngakolunye uhlangothi, ukuzenzela lo mshini, bengilokhu ngifuna izindwangu ezahlukahlukene ezingamelana nezimo ezinomswakama emazingeni okushisa aphakeme, bekunganele yini uma amanzi okunisela indwangu ebepholile?